Adikao io Kody io azafady * :
RINDRIM-BAVAKA ( 4 - 5 - 6 - 7)
Misaotra Jeso Kristy Mpamonjy fa noho ny Tenanao natolotra itondra ny fahotako,ny heloko,ny fahalemeko,ny aretiko,dia afaka aho satria fahasoavana sy famindram-po avy @Andriamanitra Ray no andraisako sy inoako izany FAMONJENA tsy voavidy izany ary dia manana anjara @zany famonjena izany aho.
Faniriako ankehitrio dia:ho tamana ato anatiko sy ameno ahy isan'andro ny FANAHY MASINAO,haazo fahendrena sy fahaizana aho,tafio fasalamana sy hery ary tanjaka ka anompo Anao @fitiavana,fahazotoana ho voninahitrao irery iany dia irery iany.
@anaran'iJESO KRISTY ZOKIKO no hanaovako izao vavaka izao.amen amen amen
(nosoratan'i RHC tamin'i 11 febroary 2014)
Misaotra Anao ao Tompo Andriamanitra Tsitoha,fa mbola noporofoinao tamiko indray androany fa Andriamanitra veloma sy be fitiavana ary mpamaly vavaka Ilay Andriamanitra inoako sy antsoiko.Misaotra Tompo,misaotra @Anaran'iJESO KRISTY fa voaantso hanao entretien i Hery,koa mamerina mametraka izany eo ampelatananao aho,matoky Anao fa itantana sy homba azy h@farany Hianao Tompo malala a!Rakofy @Ranao izy Jeso ô ary tolory saina,fahaizana,fahendrena avy Aminao.
Ka Hianao mihintsy no manokatra ny vavany,andresy lahatra ny mpanadina handray azy ao @io toeram-piasanana io.
Sambatra anie izahay manana ANAO Ilay TELO NEFA IRAY ihany dia Andriamanitra RAY,Andriamanitra ZANAKA,Andriamanitra FANAHY MASINA;@Anaran'i Jeso KRISTY ZOKY no anaovako zao vavaka izao.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 29 janoary 2014)
Ry Jeso Kristy Zokinay o!misaotra Anao noho ny fahasoavana sy famindram-po arotsakao @ankohonako isan'andro ary vaovao isa maraina.deraina mandrakizay ny Anaranao masina.mangataka asa tsara avy Aminao aho Tompo fa ilaina ny manana asa tsara karama mba iantrehako ny fiterahako sy ny fandraisana ty zanako avy AMINAO iany koa zay tena isaorako Anao ary atolotro Anao sahady anjakanao ny fiainany ary ho sakaizanao izy.
Tompo !fantatro fa eo ampelatananao ny fahefana manome asa ary mino koa aho @ foko manontolo fa Andriamanitra mihaino vavaka Hianao ary afaka mamaly vavaka @ fotoananao;ekeko ny maha Tompo Anao,ny maha Andriamanitra be fitiavana ANAO.
Mila Anao ny fiainanay,mila ny fanatrehanao, ary mila ny fahafenoiny Fanahy Masinao mandrakariva.
MISAOTRA @ANARAN'I JESO KRISTY.AMEN
(nosoratan'i Mialy tamin'i 10 febroary 2014)
fiderana Midera sy mankalaza ANAO aho ry Ray fa tsara HIANAO ary mpanome ny tsara ary vavolombelon'izany izahay mianakavy.
Be voninahitra Hianao,masina sy marina fa ny masoko no nahita,ny sofiko no nandre ary ny Fanahiko no vavolombelon'izany iany koa.
ASANDRATRO AVO INDRINDRA NY ANARANAO @ANARANi Jeso Kristy satria Mpanjaka sy tompon'ny fahefana rehetra Hianao.Atolotro Anao Tompo ô,ny toerana mahaMPANJAKA ato anatiko sy eo @ ankohonako,Lehibe ka mendrika ny dera,ny haja, ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Hianao.
Misaotra Jeso Zokinay fa Zanak'Andriamanaitra ary Andriamanitra Hianao.
Mendrika Hianao;ooooo prends la place du ROI MON DOUX JESUS.AMEN-AMEN-AMENN
(nosoratan'i christiana tamin'i 4 febroary 2014)
Jeso Kristy ô.
Misaotra Anao zokinay,nisolo vava anay teo anatrehan'Ilay Ray masina sy marina ary tsy tia ratsy.
Nifona ho anay Hianao ka ahafahanay mandray ny fahasoavana sy ny famindrampo avy Aminy.
Mino aho fa afaka itondra zay retra mavesatra eo @fiananay eo anatrehanao Andriamanitra izahay.
Raiso Tompo ny fanirianay ka ra fantatrao fa mahasoa dia Hianao mahay manatanterka satria ANDRIAMANITRA tmpon'ny fahefana Hianao.
@Anaranao Jeso Kristy Tompo.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 30 janoary 2014)
Ry Andriamanitra be fitia sy Tompon'ny fahefana rehetra ô!
Miantso sy miankohoka eo anatrehanao aho,hifona sy hivalo ary ibebaka fa mpanota ary mangataka @Anaran'i Jeso Kristy ny herinao homba ahy hialako tanteraka @reo ota mora maazo ahy.tsapako Tompo fa rikorikom-pahotana aho.leo ary tsy tia mitrosa intsony aho,ampianaro aho Jeso a!hahay hiafy ary ankasitraka zay fiainana omenao ahy.
Leo ary tsy te andainga ntsony koa aho Jeso a!manenina foana aho refa avy madainga sady lainga azo tsy natao akory ndraindray.mifona re ry Tompo ô.
Vonjeo aho @Anaran'i Jeso. Fanahy Masina ô!tantano ary toroy lalala mandrakariva ande @fahitsiana fa te ahita ny Voninahitrao eo @ fianako sy ny fiainan'ny ankohonako aho.AMEN.
(nosoratan'i rhc tamin'i 17 janoary 2014)
MIDERA NY ANARANAO ZAHAY RY TOMPO O!KA HIRA NO VENTESINAY HOE HAJA,SAOTRA,HERY,MBA RAISO HO ANAO;
JESO MPANJAKA MALAZA NO TOMPO MPANJAKANAY,MAHERY SY TSARA INDRINDRA KA IZY NO ARONAY
MENDRIKA ANKALAZAINA NOHO NY HERINY.ERA-TANY SY LANITRA KOA NY ZO AMAN-DAZANY.
RY TOMPO MPANJAKA MAHERY O MIHAINAO.AVY MANAIKY TOKOA IZAHAY FA TOMPO NY HERY REHETRA HIANAO TSY MISY MIHINTSY NY TOA ANAO TSY TRATRY NY SAINA NY HERINAO;
NY FIDERANA ZAY ENTINAY RAISO RE ! NY HAJA ATOLOTRANAO ETY RAISO IZAO.
Misaotra Tompo Andriamanitra Tsitoha ô .
(nosoratan'i njrad tamin'i 28 janoary 2014)
Misaotra Tompo fa mbola afaka miantso ny Anaranao Masina aho na dia tsy mendrika aza.
Misaotra fa noho ny Ran'i Jeso Kristy izay noraisiko sy inoako fa mabadio ahy dia afaka ny ahita ny Voninahitra aho eo @fiainako sy ny fiainan'ny ankohnako rehatra.
@ Anaran'i Jeso Zanakao Lahy tokana no anaovako izao vavaka izao.amen
(nosoratan'i njrad tamin'i 20 janoary 2014)
Tompo malala ô! miantso Anao @ fahatokiana tanteraka Anao aho fa mihaino ahy Hianao.
@Anaran'iJeso Kristy no anaovako zao vavaka zao:oe apetrako eo ampelatananao feno Tompo ,ny asako a;na ny aty ampesana na ny asa any atrano,ka na misy aza ny olana dia ivoaka ho mpandresy satria Hianao Ilay tena Mpandresy no momba anay.enga anie mba iseho eo @ny fifandraisako @mpiara miasa ny Voninahitrao ary androso tsara ny asa ka ho lavorary zay retra atao.entiko ambavaka iany koa eto ny karaman'ny mpiasa sy ny hofatrano mba omenao satria tazomiko ny sal.91"JEHOVAH NO MPIANDRY AHY,TSY ANAN-JAVA MAHORY AHO..."ary koa fantatro fa misy izay retra ilaiko ao Aminao.
Matoky Anao aho ry Ray Tsitoha ô anio,rampitso ary,mandrakizay.
(nosoratan'i njrad tamin'i 27 janoary 2014)
Tahio Jesosy ny zanakay any ampianarana.
Omeo fahendrena, fahaizana ary ahita fitia eo anatreanao.
Tahio koa mba hifankatia izy dahy, sy hitombo amin'ny fahalalana Anao.
(nosoratan'i R&Noro tamin'i 26 janoary 2014)
Mangataka fitahiana aminao aho Jesosy tompo amin'izao vali-panadinana izay andrasako izao.
Mba afaho amin'izany fanadinana izany Jesosy raha sitrakao.
Eny ry Tompo, 4 taona tokoa aho izay no nidouble classe foana kanefa Tompo tsy kivy satria fantatro fa tsy noony amiko na noony pitsara izany ny fanapahakevitra fa anao irery ihany.
Mba eny zany vavako izany Tompo Amen
(nosoratan'i Andry tamin'i 13 janoary 2014)
Andriamanitra lehibe indrindra ô, be fitiavana indindra sady mpamindra fo, manaiky ny hatsarànao izahay, miondrika am-panetren-tena manoloana ny halehiben'ny fahefànao izahay Ray ô,fa novalianao vavaka izahay ka indro mitsaika ny hosolofo sy dimby, fa tsy misy tsy hainao atao, tsy mahavita tena irery izahay Ray ô, fa sitrakay tokoa ny ho tantaninao mandrakariva, koa aza mandao anay ianao Ray ô, fa mombĆ anay ho tody soa amantsara, tsy ho azon-tsapona ny dia;
Amin'ny anaranao Jesoa ô izany vavaka izany!Amena.
(nosoratan'i Ony tamin'i 16 janoary 2014)
petit-fils petit-fils :
Tompo malala ô.
Misaotra fa Hianao mamaly vavaka ary Hianao manatanteraka ny tsodranonao.
Misaotra fa efa andalana ny zafikeliko noho ny fahasoavanao sy ny famndramponao.
Apetrako feno sy tanteraka eo ampelatatanao Tompo ô,ny hoavin'io zaza io,ary atolotro ANAO sahady izy sy zay momba azy rehetra mba Hianao no Tompony sy Andriamaniny ary izy ho miaramilanao Jeso.
Omeo fahasalamana izy sy ny reniny,dia fahasalamana ny fo, saina,vatana ,fanahy;tantano @ fombanao izy mianaka Jeso a!raiso tsy isaraka Aminao mandrakizay anio,ampitso ary mandrakizay.
Sambatra izahay manana Anao ho Tompo sy Andriamanitra mpahary anay.
Misaotra Ray Zanaka Fanahy Msina.
@ Anaran'i Jeso Kristy no anaovako izao vavaka izao.amen
(nosoratan'i Grand-maman tamin'i 16 janoary 2014)
Misaotra ANAO ary tena miankohoka eo anatreahanao aho ry Andriamanitra Ray Tsitoha.
Misaotra ndrindra ry Jeso Kristy Zokinay,manaiky Anao sy nyFamonjena vitanao aho,mino Anao aho ary miantso Anao aho Jeso andray ny toerana mahaMpanjaka Anao ato ampoko indray @ ty taona 2014 ity.
Misaotra Anao aho FANAHY MASINA Mpanalalana ary Mpanolotsaina ahy sy ny ankohonako mandritra ity taona 2014 ity sy ny hoavy mmirtra mbola omenao.
Fenoy ANAO mandrakariva ny mpanomponao hahay isafidy miaraka @ torolalalanao FANAHY MASINA ô.
Mila foana foana aho ry TELO ZAY IRAY DIA NY RAY ZANAKA FANAHY MASINA,@Anaran'i Jeso no anaovako zao vavaka izao.AMEN
(nosoratan'i Christiana tamin'i 16 janoary 2014)
TOMPO O, misaotra Anao izahay raha nahatratra izao taona vavao izao izay hapetrakay eo am pelantananao satria tsy hainay na fantatray ny ho avinay.
Mamela ny helokay Ianao tamin ny andro lasa rehetra izay mampalahelo Anao fa matoky izahay JESO fa tsy misy tsy hainao ny zavatra rehetra.
Ny fasalamana, ny asa, ny fianarana, izay rehetra mahasoa anay dia hangatahinay ny fitiavanao indrindra TOMPO.
Amin ny anaranao Mpamonjy izay efa nandresy ny fahafatesana no hanaovanay izany vavaka izany. Amena
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 11 janoary 2014)
Ry Jehovah Andriamanitra ô! Jehovah nahary ny lanitra sy ny tany ary nahary anay olombelona koa. misaotra indrindra, eny misaotra Tompo o! fa notahinao izahay, namindranao fo, novelominao ka endrey Tompo o! faly sy ravo ny fo fa nahatratra izao andro farany taona 2013 izao !
Mankasitraka Ray o! @ anaran'i Jesoa Kristy Tomponay ! Nandrindra ny taona 2013 dia teo aminay foana Ianao na dia nandalo olana sy fizahantoetra samhafa aza izahay.
Teo koa ny fitahiana mananambiampy sy ny fahasoavanao.
Tsy ampy ny teny entimilaza ny fisaorana sy fankasitrahana Tompo o! Ny voninahitra dia ho Anao irery! ary dia mbola maniry fiombonana feno avy Aminao Jesoa @ andro ho avy rehetra, taona vao2 2014.
@ anaran'i Jesoa Kristy irery ihany no hanaovako izao vavaka izao, misaotra Tompo o!
(nosoratan'i Noro tamin'i 31 dessambra 2013)
Ray o!Mpamindra fo Ianao, mifona Aminao aho noho ny tsy fahamendrehako, mifona Aminao aho noho ny heloka rehetra vitako.
Matoky aho Tompo o! fa hodiovinao aho ka olom-baovao hanao ny sitraponao am'ity taona vaovao ity
(nosoratan'i Nirina tamin'i 5 janoary 2014)
Ray o! ambony indrindra Ianao, ny faniriako mandritra ity taona ity Tompo dia apetrako eo ampelatananao tanteraka,tsy miova Ianao,ary tena matoky Anao aho Tompo.Amen
(nosoratan'i Nirinatamin'i 4 janoary 2014)
Ray o! Andriamanitra tsy miova Ianao, mpanastrana Ianao taloha ary mbola manasitrana ankehitriny, sitrano aho Tompo o!ary sitrano koa ny olona izay tiako.
Misaotra betsaka Tompo o!Amen!
fiaramonina fiaramonina :
Hianao no Andriamanitro,mafantatra tsara ny lasako sy ny hoaviko.
Hianao Ilay efa nametrahako ny fikasana retra ary Hianao no manatanterakan,ka n'inon'inona mandalo eo @fiainako sy ny tokatranoko dia tsy atahotra aho satria efa nadalo teo anatrehanao ary Mino sy Matoky aho fa efa eo ampelatananao ny zavadrehetra;@Anaran'Jeso Kristy Mpamonjy sy Mpanafaka anay.
Ny teny izay tkn tenenina TOMPO ô dia aoka Hianao no andahatra mba ho tafapaka any @zay tianao iantefany.
Manavao ny fanolora-tenako aho ho Anao ary miantso ANAO mva iditra iany koa ato ampo handray ny toerana maha mpanjaka ANAO(prends la place du ROI dans ma vie Jesus.amen)
(nosoratan'i rhc tamin'i 17 desambra 2013)
Tompo ô, reraka aho, tsy zakako intsony ny vokatry ny fahotako, reraka aho Jesosy ô! mila vonjy, afaho aho, te hanana fahamasinampiainana aho Tompo ô, esory ireo rehetra mamatopatotra ahy fa anio Jesosy ô, miantoraka eto ampototry ny hazo fijalianao aho, tsy mendrika na dia hiantso ny anaranao aza, kanefa hoy Ianao hoe izay manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy, raiso aho Tompo ô.
Mifona, mamindra fo amiko, vahao aho, diovy aho Jesosy ô, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokiko no hangatahako izany,
(nosoratan'i Ely tamin'i 10 dessambra 2013)
ASS.ARO ASS.ARO :
Misaotra Tompo fa mbola nomenao tombonan'andro ka afaka miantso ny Anaranao na dia tsy mendrika aza,mifona ianao koa noho ny tsy fahamendrehana, mifona fa nanota teo anatreahanao;nanao zay nampalaelo Anao t@ teny sy fihetsika,tsy nahatanteraka ireo nekena.
Mamindra fo Ray ô @ANARAN'i Jeso Kristy zokinay sady mpamonjy anay.
Mila Anao aho @foko manontolo,@foko rehetra.mangataka aho,ary tena mitalaho,manantena koa ary mino satria efa nentina teo Aminao, ny test natanony zanako lahy.
Fa 1 iany ono no raisina nefa maro ireo nantsoina; mangataka mba ho tafakatra ho isan'ireo hampanaovina entretien dia ho tody @farany satri Hianao no efa nametrahana izany ary ho voninahitrao irery iany ary tena fahasoavana fa tsy hery na tanjaka na koa fahaizany samy irery fa avy Aminao.
Mila ny fanatrehanao zahay ry Tompo ary mangataka ny fahafenoiny FANAHINAO MASINA itaridalana MANDRAKARIVA;
@ Anaran'ny RAY ZANAKA FANAHY MASINA;AMEN .
Misaotra jeso Zoky tia anay.
(nosoratan'i neny tamin'i 16 desambra 2013)
Misaotra indrindra ry Tompo noho ny tombon'andro feno fahasoavana nomenao ny ankohonako iray manotolo.
Deraina sy ankalazaina ny Anaranao Masina sy Marina.
Omena Anao ny voninahitra ary atolotro Anao ny fahefana feno izay efa Anao iany hatrizay hatrizay.
Tompo a!misaotra fa voaantso hanao test sy entretien ny zanako ka mangataka Anao homba sy hitahy an'iHery ka hofeno ny fantrehanao mandrakariva ny fiainany.
Kasio izy Jeso zoky a!itoero ny fony ka izay rehetra ataony dia ho voninahitrao,ao koa ny concert kasaina atao @14 dec dia Hianao no efa mialoha lalana izany.
Mangataka koa aho, mba tsy alefa any @ faritany i Hery,nefa ts ny sitrapoko no atao fa ny ANAO.
MISAOTRA fa tsy takatry ny saina ny fitianavao anay. Mankasitra ary miankohoka tanteraka eo anatrehanao @fotoana rehetra ry Tompo Mpanjaka sy Mpamonjy.
ALLELOUIA ! AMEN.
(nosoratan'i neny tamin'i 10 desambra 2013)
ny zanakony zanako :
Misaotra Ray Masina Tsitoha @zavatra retra tsy voantonona nataonao tamiko sy ny ankohonako.
Mbola avaoziko indray TOMPO ô ny fitokiako Anao ka hanolorako ny fiainan'i Heritiana zanako eo ampelatananao:omeo fahendrena avy Aminao,tolory fahaizana entiny mitondra ny fiainana,ary indrindra Jeso a!! omeo asa sahaza avy Aminao.
Ka ambino Ray ô sy tahio fa mino aho fa izay tahionao dia voatahy mandrakizay.dia enga anie izy tsy hiala mandrakizay @fitiavana ANAO sy ny fanompoana ANAO RAY ZANAKA FANAHY MASINA;
@ ANARANY JESO.
(nosoratan'i neny tamin'i 4 desambra 2013)
Ry Andriamanitra Tsitoha ô!misaotra fa mbola nomenao zotom-po sy zotom-panahy aho iditra eto @ty site ity indray mba isaotra Anao.
Mino aho vokatry ny Fanahinao Masina izany.
Isaotra noho ny testpositif-n'ny zanako vavy.
Mangataka aho ry Tompo mba raisinao eo Aminao sahady dieny izao ny hoavin'io zaza ao ankibony io na ara-batana na ara-tsaina fa indrindra ny ara-panahy(JER 1/5) dia mangataka koa mba rakofy sy tafio fahasalamana sy famindram-po ny reniny.
Ilay tokatranon'izy mvd anie ry Tompo ô, mba anjakan'ILAY FITIAVANAO dia ilay fitiavana marina sy masina ary maharitra mandrakizay.
@ANARAN'I JESO KRISTY no anaovako izany vavaka izany.
JESO KRISTY Ilay Zanaka LAHITOKAN'Andriamanitra,velona mandrakizay eo ankavanan'ny RAY ary mifona ho anay @ vavaka tsy hay tononina.
Misaotra JESO a!!!.AMEN
(nosoratan'i Christiane tamin'i 9 desambra 2013)
Tompo Andriamanitra Tsitoha ô!inty aho miankohoka eo anatrehanao ary midera sy manome voninahitra ny Anaranao.
Mila Anao sy ny fanatrehanao ary ny fombanao Ray ô izahay mivady.
Fenoy ny herinao izahay ary aoka hanaraka anay ny Fahasoavanao sy ny Famindramponao ra hanokatra ity asa vaovao ity izahay(serigraphie)
Hianao ry Andriamanitra RAY ZANAKA FANAHY MASINA no Mitarika sy Mitantana izany orina'asa kely izany.Atolotra Anao ny FAHEFANA feno Tompo ô.
Dia sokafana @ Anaranao JESO ny asa ka ambino sy tahio izany asa manao serigraphie izany.AMEN
(nosoratan'i RFN sy RHC tamin'i 04 dessambra 2013)
RAY ô, misaotra Anao aho nahatratra izao anio izao,Tompo ô! mifona Aminao aho tamin'ireo tsy fahatanterahako rehetra, mangataka aho amin'ny anaran i Jesoa Kristy, manana trosa be aho Jesosy ô, afaho aho,
Mifona Aminao aho ny nahatongavan izany teo anatrehako, manadiova ahy Jesosy ô!mijaly aho, tsy manampiadanana sy fifaliana, tena tsy zarizary ny tokatranoko, ny zanako zara raha mitafy, ny ho hanina isan'andro mbola ady lava fa mandoa trosa foana aho raha vao mandray vola isambolana,
Vonjeo aho Jesosy ô, mila ny sandrinao hanafaka ahy aho Jesosy ô, mitalaho eto ampototry ny hazo fijalianao aho, afaho aho.
Amin'ny anaranao Jesosy no hangatahako izany ho Anao Andriamanitra ny voninahitra Amen
(nosoratan'i Ely tamin'i 27 novambra 2013)
famindram pofamindram po :
ANDRIAMANITRA O, mamela ny heloko Ianao amin ny ratsy rehetra izay vitako tsy mifanaraka amin ny sitraponao.
Hitanao ny fahalemeko TOMPO O ary izany no hitalahoko Aminao satria hainao ny zava drehetra.
Matoky ahy fa hamindra fo ahy Ianao TOMPO O .
(nosoratan'i Mme Sissi tamin'i 28 novambra 2013)
zanaka lahyzanaka lahy :
Tompo Andriamanitray o.
Misaotra fa mbola afaka miantso ANAO eto ndray.
Manararaotra ny fanatrehanao aho mba angatahiko Aminao andray antanana ny fiainany Hery zanako.
Tafio fahendrena ary ambino sy vimbino izy @ fiainany sy ireo decision tokony ho raisina Tompo malala o.
@ ANARANY JESO KRISTY NO ANAOVAKO ZAO VAVAKA IZAO.MISAOTRA TOMPO.
(nosoratan'i maman tamin'i 30 novambra 2013)
Tompo O mankasitraka ny amin zay rehetra nomenao ny tokantranoko nandritra izay contrat 1 taona izay ka hifarana am 4 décembre izao.
Mangataka ihany ko ry Ray ny hanomezanao ASA vaovao tsara no hananana fiadanantsaina hafahako mamelona ny ankohonako.
Tano mafy am tananao tsy ho resy.
Mankasitraka Ray o Amen
(nosoratan'i NIVOMALALA RAHELIARINORO tamin'i 02 dessambra 2013)
Tompo malala a!misaotra Anao fa nomenao tombon'andro ary mifona fa tsy tanteraka teo anatrehanao.
Mino sy matoky fa ampy anadio ahy sy ny ankohonako ny RAN'I JESO KRISTY.
@ ANARAN'i JESO KRISTY iany koa Tompo ô, no ametrahako ny fiainan-tokatranon'ny zanako M.syA.Omeo fahazotoana @fanompoana ANAO ka tolotry hevitra anitarana ny Fanjakanao.
Omeo fahendrena ary ambino izy 2 @ asany.Dia mba ho tokatrano aharitra @ farany anie ka faty no isarahana.
Mitalaho aminao aho Andriamanitra Ray ô,enga anie ka mba hahazo valiny mahafapo ary tsy ho ela ny fangatahana fahazoan-dàlana nataon'ny vadiko mba hahazoany miasa ao amin'ny orin'asa izay iasako.
Misaotra anao sahady aho Ray ô, fa tia anay ianao.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay.
(nosoratan'Ity mpanompon'Andriamanitra tamin'i 23 novambra 2013)
faly Aminaofaly Aminao:
@ny fo toroto sy diboky ny fifaliana manana Anao Tompo Andriamanitra Tsitoha sady Mpihaino vavaka no hanatonako Anao ry JEHOVAH SHALOM.JEHOVAH RAPHA.JEHOVAHA ADONAY.JEHOVAH TIA ANAY.AMEN AMEN AMEN.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 15 novambra 2013)
JESOSY KRISTY TOMPO Ã´,MISAOTRA ANAO AHO NOHO NY FITIAVANAO LEHIBE.AMEN.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 13 novambra 2013)
Ray ô, Misaotra Anao @ anarany Jesosy, misaotra anao @ nataonao taminay,na dia ny aretina mahazo ny mamako any M/car aza nefa izaho mbola aty andafy.
Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa hoy Anao.
Manaiky izay itondranao anay izay Ray ô, ary mino tanteraka fa ho any @ fiadanana izany fa tsy loza.
Koa alefaso ny teninao Ray ô hanasitrana ny mamako, fa Ianao ilay tsy miova omaly, anio ary mandrakizay.
Ho tanteraka anie ny fanasitranana azy (Jer. 33:6) @ anarany JESOSY Amen
(nosoratan'i thomah tamin'i 15 novambra 2013)
asa vaovaoTOKANTRANO :
Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy Masina ô.
Misaotra fa fahasoavana sy famindrampo no nomenao sy narotsakao tamiko sy ny ankohonako.
Tompo malala a!za mangataka asa avy Aminao ho an'iHERY;fantatrao Tompo ny toerana efa misy azy,ary ny toe-pony @zao fotoana zao.
Mamindra fo aminy Tompo @zay retra nataony na nosaininy ka tsy mifanaraka @sitraponao.
TOMPO a!miangavy sy mitalaho Aminao aho,mba omeo zay irian'ny fony i Hery @resaka asa.
Ary mivavaka aho mba hanana fotoana sy finiavana izy @ fanompoana Anao.
Hanolotena ho Anao ary ahay hankasitraka Anao @ androny rehetra omenao azy.
Raiso an-tanana Tompo Tsitoha ô! ny fiainany ao anatiny zao fahatanorany zao.
@ANARAN'I JESO KRISTY TOMPO SY MPAMONJY NO HANAOVAKO ZAO VAVAKA IZAO;
(nosoratan'i Maman tamin'i 15 novambra 2013)
faly Aminaofaly Aminao :
Ry Andriamanitro,Ilay nahary izao rehetra izao,Ilay Tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra;atolotro Anao ny saotra,dera,voninahitra ary efa hanao ny laza sy ny hery ary ny fiandrianana.
Faly indrindra aho afaka miantoraka Aminao sady mahafatantra Anao na dia sombitsombiny fotsiny iany aza.
Tsy ho takatr'ity saiko ity mandrakizay ny fahalehibeazanao,ny fahatanterahanao,fa ny fantatro dia masina indrindra Hianao,b fitiavana,tia ahy sy ny ankohonako,be famindram-po,...TSARA HIANAO ARY TENA TSARA SY MPANOME NY TSARA..tsy ampy ary tsy hitako ny teny aloaky ny vavako mahalaza ny fifaliako manana ANAO RAY ZANAKA FANAHY MASINA,TELO IZAY IRAY,ho Raiko,@alalan'i Jeso Kristy Zokiko,Zanak'Andriamanitra lahytokana.Mino ny famonjena vitanao aho JESO a!mila ny fahafenoin'ny FANAHINAO MASINA mandrakariva aho.
(nosoratan'i R.H.C tamin'i 15 novambra 2013)
Misaotra,midera ary mankalaza anao izahay Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ô.
Lehibe ny fitiavanao. Na dia tsy fantatro aza izay ho ampitso dia mahatoky aho fa fahasoavana no hameno ny fiainanay mivady.
Satria Ianao no heriko sy fialofako ary famonjena ho ahy.
(nosoratan'Ity mpanompon'Andriamanitra tamin'i 8 novambra 2013)
Andriamanitra Rainay ô, eo ampela-tananao no apetrako ny faniriana mangina ato ampoko mikasika an'i Guy sy Narindra.
Enga anie Ray ô ny sitraponao irery ihany no ho tanteraka.
Amin'ny anaranao Jeso Kristy Tomponay no anaovako izao vavaka izao.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 11 novambra 2013)
Rainay izay any an-danitra ô, mitalaho aminao aho, manankarem-pahasoavana Ianao, ampaherezo, ampio ary tahio sy tohano ireo vahoaka filipiana manoloana izao loza navelan'ny typhon izao.
Amin'ny anaran'i Jeso Kristy Tomponay.
Ô Dieu notre Père,nous T'en prions pour que les démarches entamées depuis plusieurs mois pour un éventuel travail, se débloquent rapidement.
Nous Te remercions déjà car Tu nous conduit avec ta main droite.
Gloire à Toi Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen!
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 10 novambra 2013)
Omeo zanakaOmeo zanaka :
Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ô, tsy misy tsy hainao atao, mitalaho aminao aho mba omeo taranaka, ho endriky ny fitiavanao ao an-tokantranonay, amin'ny fahefanao tsy manam-petra esory ny sakana rehetra ry Ray ô, ka valio vavaka izahay, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, amen.
(nosoratan'i Ony tamin'i 12 novambra 2013)
Apetrako eo ampelatananao Jesosy ny ho avy ny zanako izay nifety ny 20 ans ny androany.
Ianao irery no ho omba azy ary hanampy azy aminy izay fikasany sy ny fiainany ho avy.
Ampio izy tsy hanadino fa ianao irery no mitarika ny lalany sy azony iankinany aminy izay rehetra ataony.
MISAOTRA JESOSY - AMEN!
(nosoratan'i Noro tamin'i 4 novambra 2013)
Andriamanitra Rainay ô, feno fisaorana Anao ny fonay noho ny fitiavanao.
Tsapako ilay tananao ankavanana mitondra anay isan'andro.
Ray ô,mitalaho aminao izahay mba hamahanao ireo olana amin'ny fiainanay mivady,Ianao mahafantatra azy ireo satria izahay eo ampelatananao.
Ampitomboy ny finoako io fitondranao soa io.
Hoy Ianao hoe ampy ho anao ny fahasoavako.Misaotra Anao sahady aho Ray ô.
Ho voavaha anie ireo olana ireo.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 8 novambra 2013)
TOMPO o! omeo mpitondra hendry ty FIRENENAY ty AMEN!
(nosoratan'i gisele tamin'i 5 novambra 2013)
Misaotra Tompo fa nivoaka ny hopital Malala.
Dingana 1 @fahasoavanao izany,apetrako eo ampelatananao Ray ny faha2 dia ny réeducation izany.
Hainao atao ny zavatra rehetra satria @alalan'i JESO KRISTY ny fanasitranana tsy tapatapany fa feno.
" VITA" HOY JESO ny famonjena,koa raisinay ny fanasitranana.
Mino,manaiky ary mandray ato ampo aho an'i JESO ZOKY.ary @ anarany no anaovako zao vavaka izao.
(nosoratan'i Tantine tamin'i 5 novambra 2013)
Manandratra Anao aho ry Avo indrindra ô! Manome voninahitra Anao ry Andriamanitra Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo.
Miondrika eo anatrehan'ny fahalehibeazanao sady mitsaoka Anao; fa Ianao no Ilay Masina indrindra.
Misaotra Anao noho ny @ireto vahoaka tafahaona @izao rindrimbavaka izao.
Mangataka ny famindramponao mba hihazonanao azy ireo tsirairay avy mba ho tafatoetra eo Aminao, fa eo ihany no mahatsara azy ireo, dia hitombo mandrakariva @ fanompoana sy fiderana Anao
Misaotra Ray ô! @ anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
(nosoratan'i Noro tamin'i 6 novambra 2013)
Misaotra Anao aho ry Andriamanitra Raiko ô! @ alalan'i Jesoa Kristy Tompo.
Misaotra noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao izay ivelomako isanandro2; misaotra ny @ zavatra reetra ; mankasitraka Tompo ô!
Manome voninahitra Anao, fa tsara Ianao sady Mpanao ny tsara.
Tsy misy ny toa Anao. Misaotra Tompo ô!
Ny faniriako dia ny mbola hihazonanao ahy eo am-pelatananao fa eo ihany no mahasoa sy mahatsara ahy.
Ampaherezo mandrakariva ny @ fanompoana ary ampitomboy mandrakariva koa ny @ finoana. Fenoy ny Hery avy Aminao mba hahomby @ asa fitoriana. Mankasitraka, manome voninahitra Ray ô!
Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, Ilay Tompo sy Mpamonjy ahy no hanaovako izao vavaka izao.
(nosoratan'i Noro amin'i 30 oktobra 2013)
Andriamanitra Ray Zanaka Ary Fanahy masina ô, feno fisaorana Anao ny fonay noho ny valimbavaka azonay.
Voaray soamantsara tamin'ny asa izay nanaovako fitsapana ny 17 Aprily 2013 aho.
Anao ny dera, laza ary voninahitra omaly sy anio ary mandrakizay.Amen!
(nosoratan'Ity mpanompon'Andriamanitra tamin'i 2 novambra 2013)
"Jesoa o, mba omeo visa (zaho) mba hihaonanay mivady. Matoky Anao aho Jesoa.
MISAOTRA TOMPO @ FIDIRANAO AN-TSEHATRA HAHATANTERAKA NY FIKASANAY. FA AMPY ANAY TOMPO O, TENA AMPY ANAY NY FAHASOAVANAO.
MISAOTRA NY @ VISA OMENAO MBA HIHAONANAY MIVADY. AMEN".
(nosoratan'i Dina tamin'i 31 oktobra 2013)
ANDRIAMANITRA O, misaotra sy manome voninahitra Anao mandrakariva aho amin ny fitiavana izay toloranao ahy, eny na dia ao anatin ny olana maro samihafa izay tadiavin i satana hangejana anay.
Mangataka Aminao aho JESOSY ny hiarovanao ny fiainako sy ny tokantranoko satria efa nitondra ny entanay Ianao ary mbola mino aho fa Mpihaino vavaka Ianao ka hamaly izany vavako izany,
Mamela ny heloko TOMPO satria tsy mendrika aho nefa hainao ny zavatra rehetra. Amin ny anaran i Jeso Kristy no hanaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Harisoa tamin'i 4 novambra 2013)
Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy masina ô, mangataka aminao izahay, esory ny loharanon'ny aretina lamosina ka omeo fahasitranana tanteraka ny vadiko.
Misaotra Tompo ô, fa mino aho fa mahay mahasitrana azy ianao.
Dera sy laza ary voninahitra Anao Ray sy zanaka ary Fanahy masina. Amen!
Ray ô! misaotra noho ny tombon'andro nomenao ahy sy ny ankohonako.atolotro Anao ny voninahitra @Anaran'i Jeso Kristy Tompo sy Mpanjakako.
Mivavaka aho ankehitrio mba raiso eo ampelatanana TOMPO malala ny hoavin'i hery @lafiny rehetra,tsindriko manokana ny fikasany hifindra asa ; apetrako eo ampelatananao ny demande,ny convocation,ny test,ny embauche,ny salaire,sy zay retra mahakasina ny taratasy.
Hianao anie hamindra-fo ka itsinjo izany ho fitahiana sy hahasoa ny fiainan'i hery zanako.
Mino ary mandray @finoana ny valimbavaka avy Aminao aho Tompo ô.
MISAOTRA INDRINDRA RAY ZANAKA FANAHY MASINA.
(nosoratan'i Maman amin'i 17 oktobra 2013)
Matoky Anao zà Jesosy
(nosoratan'i Haja tamin'i 16 oktobra 2013)
Jesosy o... mbola inty aho.. mbola tsy milamina ny tokantranoko .. malahelo aho Tompo o!
Ampio aho Raiko O.. Jesosy o jereo ary ampio ny tokantranonay.. mamela ny helokay rehetra JESOSY o
(nosoratan'i Miso tamin'i 16 oktobra 2013)
Tompo Rainay tsara indrindra o, Misaotra fa tsy izaho no nifidy Anao fa Ianao no nifidy ahy.
Misaotra fa nosafidinao ty mpanompo tsy mahasoa ity ho mpiasa hampitatra ny fajakanao.
Misaotra Jeso. Amen
(nosoratan'i Thiena tamin'i 21 oktobra 2013)
Tompo Andriamanitray ô! misaotra Anao noho ny tombon'andro nomenao anay.
Misaotra Anao @zavatra retra Tompo, eny fa na dia @aretina mahazo an'i Malala aza.
Hevitra itondra fiadanana izao fa tsy loza, mino izany aho ary manaiky ny fandaharanao ny fiainanay.
Efa nentin'i Jeso Kristy Zokinay ny aretina rehetra,koa manonona fanasitranana @ Anarany Masina aho.
Misaotra Jesosy a!
(nosoratan'i tantine tamin'i 22 oktobra 2013)
sazy sazy :
Ry Andriamanitra Raiko ô. Miantso Anao @ Anarany JESO KRISTY ZOKY aho.
Mila vonjy mahagaga avy Aminao aho. Diso aho ary mifona t@ fanaovana tsinotsinona ny asa tokony natao sy ny tsy fandoavana hetra tkn naloa.
Mifona ary mibebaka fa iezaka tsy amerina ireo fahadisoana tsony. Alamino Tompo ô ity taratasy fitakiana vola b tonga ity.
Tsy takatry ny saiko hoe 35MILLIONS no asainy aloanay. Koa ra hande hoany @ CNaPS any aho Tompo ô ,dia Hianao RAY ZANAKA FANAHY MASINA no efa mialoha ahy any ka andamina ary ikasika ny fon'ireo tompon'andraikitra.
Tompo a, misaotra ndrindra @fanatrehanao sy ny famindram-ponao aminay ka aita fitia eo imasonao anie izahay.
@ANARAN'I JESO KRISTY MPAMONJY.
(nosoratan'i CNaPS amin'i 27 Septambra 2013)
Andriamanitra Tsitoha o!
Misaotra anao aho noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao izay asetrinao isan'andro,eny!na dia tsy mendrika aza.
Tena tiako Enao Ray o!
(nosoratan'i Narindra tamin'i 26 septambra 2013)
Ry Andriamanitra Ray ô!misaotra Anao noho ny tombon'andro nomenao ahy.
Deraiko sy ankalazaiko ny Anaranao Masina.
@Anaran'i Jeso Kristy Zanakao lahy tokana no anaovako izao vavaka fankasitrana sy vavaka fanekena fa izaho dia manaiky Anao ho Raiko, manaiky aho fa zanakao.
Mino ny asam-pamonjenan'iJeso Kristy aho,ary mandray AZY ho Mpitaridalana sy Mpiaro ahy ;
Mangataka ny fahafenoin'ny FANAHY MASINA iany koa aho,avy Aminao Jeso Zoky tiako.
Mametraka ny fahatokiako feno sy tanteraka @ILAY 3 NEFA IRAY aho dia "RAY ZANAKA FANAHY MASINA".
(nosoratan'i Christiane amin'i 9 oktobra 2013)
Teny finoanaTeny finoana :
Asandratrao ndray ho tsara kokoa,Tompo ô, ny fiainako mihoatra noho ny taloha
Tsy avelanao ho rava mandrakizay aho Tompo ô, tia ahy Hianao.
(nosoratan'i rfn sy rhc tamin'i 7 oktobra 2013)
Rainay izay any an-danitra,hohamasinina anie ny anaranao,ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao.
Misaotra Tompo fa navelanao miantso Anao sady nomenao tombon'andro, misaotra Fanahy Masina, ary misaotra Jeso Kristy @fanatrehanao sy fandraisanao antanana zao vavaka izao.
Mangataka aho Tompo,tahionao Mialy @formation ataony ka ahazo asa sahaza any @banque,asa avy Aminao Tompo a!aza avela atoky tena zahay fa tena atoky Anao irery iany.
@anarany JESO KRISTY no anaovanay zao vavaka izao.
(nosoratan'i mialy tamin'i 1 oktobra 2013)
Vavakin'ny Maro Vavakin'ny Maro :
Mangataka antsika izay mamaky izao vavaka izao mba hitondra ambavaka an'i Tamby isan'andro.
Jesosy ô, miantso ny anaranao masina izahay, satria fantatray fa ilay devoly fahavalonay dia matahotra izany Anaranao Masina Izany.
Jesosy ô mivavaka aminao izahay ny mba hanafahanao an'i Tamby amin'ny fangejan'ilay satana! ampahafataro azy Jesosy fa efa fahavalo RESY ilay fahavalonay.
Ary ampahatsahivo azy fa raha "IANAO NO MANAFAKA, DIA TENA AFAKA TANTERAKA IZAHAY"
Jesosy ô, omeo ilay Fiadanampo avy aminao izy ahitany torimaso, sy ahafahany miala sasatra
Omeo tanteraka azy ny FIADANANA avy aminao ry Jesosy Tomponay ô
Amin'ny Anarano lehibe, no anadratanay rehetra izany vavaka izany
(nosoratan'i RNMA amin'i 02 Septambra 2013)
Tompo Andriamanitra Tsitoha ô!
Misaotra Anao aho fa mbola nomenao tombonandrom-pahasoavana indray izahay mianakavy.
Ankehitriny Tompo, dia @Anaran'i Jeso Kristy no angatahiko mpiara-miasa avy Aminao.
Efa hitanao ny asa ary isaorako Anao @ foko manontolo izany,tsy ampy olona hiasa anefa izahay ary ze teo aza dia tsy afaka miasa ndray.
Koa @ Anaran'i Jeso Kristy sy ny fahefany no androhahiko ny asan'i devoly sy satana iala ary tsy anakery,tsy anam-pahefana eo @ asanay.
Miala zao dieny zao ny fikasan-dratsiny satana andrava ny asanay @ANARAN'I JESO KRISTY TOMPO MPAMONJY SY MPANAFAKA ANAY.
(nosoratan'i avana cs amin'i 11 Septambra 2013)
Mino izahay fa ho afaka tanteraka @ trosa.@ANARAN'I JESOA KRISTY;
Tanteraka aminay mivady izany satria Tenin'ny finoana.
Hianao Ray Zanaka Fanahy Masina no manatanteraka izany eo @ fiainanay.
(nosoratan'i RHC & RFN tamin'i 09 septambra 2013)
Misaotra Tompo a!misaotra @valimbavaka,misaotra noho ny fahasalamana, misaotra t@ vahaolana, misaotra t@sakafo mahavelona nomenao, misaotra @ fifankatiavana, misaotra @ vola nomenao, misaotra noho ny zanaka hendry, misaotra noho ny asa, misaotra fa mbola afaka namita adidy, misaotra fa mahita ny fahatsaranao zahay.
Raiso TOMPO zao fisaorana izao @Anaran'i JESO KRISTY.
(nosoratan'i maman tamin'i 3 septambra 2013)
Misaotra Anao zahay Andriamanitra @ zvtr rhtr.
(nosoratan'i haja tamin'i 24 septambra 2013)
Jesosy Zoky o isaorako Ianao satria ef teo anilako fon hatramzay nanampy ahy t@ zay rehatra natao dia ny examen zany!eto ampiandrasana n resultat za zao Jesosy,dia esory ato anatiko ny tebiteby rehetra ary aoka hanana fatokisana sy fanantenanany @ zay ho vokany!
Mino aho Jesosy fa efa notahinao ary misaotra Anao sahady ny @ vamimbavaka!izany rehetra izan anie mb ho voninahitrao rery ihany !
(nosoratan'i anonyme tamin'i 01 septambra 2013)
zafikely zafikely :
Misaotra Tompo malala Tsitoha fa Andriamanitra Mpamindra fo Hianao.
Misaotra fa voavela ny heloko noho ny Anaranao Masina.
Fa hoy koa Hianao hoe:ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra;mivavaka aho ho an'i AsyM zanako,mba ahazo zazalahy kely avy AMINAO izy ireo,zaza salama saina,vatana,fanahy,zaza feno ny Fanahinao sahady ka ho mpanomponao sy miaramilanao Jeso.zaza ho fifaliana sy fahasambarana hoan'reo ray amandreniny sy ny fianakaviana.
Tompo ô! manantena sy mino fa hirotsaka ny valimbavaka koa misaotra,ary miankohoka eo anatrehanao aho midera sy mitsaoka ny Fahalehibeazanao.
@ANARAN'i JESO KRISTY TOMPO NO ANAOVAKO ZAO VAVAKA IZAO.
(nosoratan'i Maman tamin'i 26 aogositra 2013)
Ry Andriamanitra Ray Tompo Tsitoha ô.
Misaotra fa mbola afaka miantoraka Aminao ndray aho @zao ora zao.
Miantso Anao @Anaran'i JESO KRISTY Zoky malala. Jeso Mpisolo vava anay eo Aminao @ vavaka tsy hay tononina.
Misaotra Anao t@ asa zay nomenao fa ankehitriny d manana fikasana ny hiverina hianatra ampitombo fahalalana sy haka diplôme ny mpanomponao M.kanefa aoka zay sitraponao no tanteraka @fiainany M. satria Hianao anie no efa mialoha lalana ny hoavin'izy mivady dia i A&M.
Misaotra Tompo ô.
@ Anarany Ray Zanaka Fanahy Masina.
(nosoratan'i A&M tamin'i 30 aogositra 2013)
Tompo misaotra betsaka anao noho ny fitantananao sy nyfiahiana anao anay
Tsy mendrika ny hanonona ny anaranao akory izahay
voninahitra ho anao irery ihany
Jesosy oh ampio ny zanako zo eo am-panaovana fanadinana bac amin'izao fotoana izao,
omeo fahasalamana i ony
Mba omeo asa vaovao aho ahazahoako manompo anao
(nosoratan'i hanta tamin'i 22 aogositra 2013)
Tompo o ! Panota tsy mendrikia ny iantso ny anaranao fa mamela ny heloko mino sy matoky ao tsy amela ay irery ianao koa mangataka @nao Ray o!mba ataovy zay hiorena nay mianakavy ato antokatrano nay amen
(nosoratan'i randrinavah nirina tamin'i 25 aogositra 2013)
Ry Andriamanitra Rainay,@alalan'i Jeso Kristy ô.
Miantso Anao aho fa mila mafy ny fanatrehanao sy ny fahafenoinao eo @fiainako aho,eo @adintsaina atrehanay mivady.
Miantsoantso Anao satria tsy anay ny ampitso,tsy hainay koa zay mety itranga.
Koa mangataka fahendrena avy aminao aho Tompo malala,mangataka tolo-tsaina iany koa @zay dinidinika atao ka aoka re ry Tompo,mba Hianao no hanendry ny teny aloaky ny vavako sy aloakany vavan'ny vadiko.
Arovy @ratsy izahay ary rakofy @RA-soan'i Jeso Kristy mba tsy hisy tanteraka aminay hafa tsy izay efa nandalo teo ampelatananao.
Avia Jeso Tompo ô,raiso ny fahefana retra ka aoka mba Hianao no andidy sy hanapaka eo @ fiainako manomboka izao indray ary mandrakizay.
(nosoratan'i vntViolette tamin'i 21 aogositra 2013)
Misaotra Anao aho ry Tompo Andriamanitro fa mbola afaka manandratra vavaka eto indray.
Faniriako fatratra RAY ô ny hanana zafikely avy Aminao,koa ampitoero zaza ao ankibon'i mialy ra sitrakao.
Zazalahy ho miaramilan'i Jeso Kristy,zaza salama saina,vatana,fanahy.zaza omenao fahendrena sy fitiavana ANAO RAY ZANAKA FANAHY ary zaza hanompo sy hanome voninahitra Anao.
@ ANARANY JESO KRISTY NO HANAOVAKO IZAO VAVAKA IZAO;
(nosoratan'i maman tamin'i 20 aogositra 2013)
Andriamanitra o!misaotra anao aho fa tsy manary ahy Ianao na dia mpanota aza aho.
Tsapaka ny fitiavana asetrinao ahy isan'andro na dia mandalo olana maro aza aho.
Tiako Ianao Ray be fitia.
(nosoratan'i steph tamin'i 13 aogositra 2013)
Tompo Andriamanitra Ray ô!misaotra ndrindra Anao ny foko sy ny saiko ary ny fanahiko d zay rehetra momba ahy sy mikasika ahy.mankasitraka ary mankalaza ary tena miankohoka eo anatrehanao.
Tsara Hianao,mpanome ny tsara,mpamaly vavaka,mpamela heloka,be fitiavana,misoatra RAY ZANAKA FANAHY MASINA;
@ANARAN'i JESO KRISTY.
(nosoratan'i christiane tamin'i 13 aogositra 2013)
Tompo Ray Masina ô, manolotra izao vavaka izao aminao aho, mitalaho ny famindram-po avy Aminao, mba hanafaka ahy amin'ireo trosa izay mameno ny fiainako.
Mitalaho ny fitantanaao aho amin'ny andro sisa hiainako, mbahanjaka eo amin'ny fiainako ny famindram-ponao lehibe.
Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo no hanolorako izany.
(nosoratan'i Razafindrakoto_Tina tamin'i 12 aogositra 2013)
TOMPO O, omeo fandrosoana mandrakariva ny olonao mba hahay ahalala sy ahafantatra Anao.
Mangataka ny fitiavanao lehibe aho mba handrotsaka ny Fanahinao Masina aty anatinay ahatsapanay fa tsy mandao anay Ianao amin ny andronay rehetra.
Mamela mandrakariva ny helokay TOMPO O ary dia mahatoky ny famindramponao izahay.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 10 aogositra 2013)
toe-panahy toe-panahy :
Misaotra Tompo fa mbola afaka mitondra ambavaka an'i Violette eto aho androany, ary tsy heriko na tanjako na fahatsarako fa fahasoavanao.
Tompo Tsitoha ô!@ anaran'Jeso Kristy no anaovaka zao vavaka izao dia ny ijerenao Andriamanitra ô an'i violette,ka iriako fatratra ny ijerenao azy @ indrafonao lehibe.
Fa matahotra mafy aho @hoavin'ny fanahin, mifona Aminao aho ra tsy mendrika akory ny iantso ny Anaranao masina.
Mifona aho Tompo fa hivavaka hoan'i Violette nefa na izaho koa aza diso teo anatrahanao.
Mifona Ray ô!menatra Anao aho.ary matahotra Anao.mifona ho ahy sy ny ankohonako aho ary mifona ho Violette indrindra koa.
@ ANARAN'i JESO KRISTY TOMPO MPAMONJY sy MPISOLOVAVA ANAY EO ANATREHANAO RY RAY.AMEN.
(nosoratan'i vntViolette tamin'i 01 aogositra 2013)
Tompo Andriananahary,Andriamanitra Tsitoha,Ray mpamorina zao rehetra izao,
Andriamanitra mahery,Rain'ny mandrakizay,@Anaran'iJeso Kristy Tompo,Zanak'Andriamanitra nandresy ny fahafatesa ka velona mandrakizay,no iantsoako Anao ry Ray izao anio zao.
Misaotra noho ny valim-bavaka nomenao,misaotra noho ny fasalaman'ny ankohonako,misaotra noho ny asa nomenao anay,misaotra noho ny Fanahinao Masina ao anatinay, sy mameno anay.
Deraina sy ankalazaina ny Anaranao.
Misaotra RAY ZANAKA FANAHY MASINA.
(nosoratan'i christiane tamin'i 07 aogositra 2013)
Tompo malala ô.misaotra fa mbola afaka miditra eto ndray mba ivavaka ho an'i violette.
Mivavaka mafy @ finoana fa mihaino Hianao, ka ijery zao fangatahiko izao:mangataka aho Tompo ô, mba hanafahana an'i violette @ fisotroana taoka mihaopapana, fifohana sigara tsy ankijanona ary ny fitenenan-dratsy,ny fanopana ary ny fanozonana olona, ny fitiavam-bola b loatra.
Mifona ho azy aho fa Hianao Jeso no tena mba angatahina hifona ho azy eo anatrehan'ny RAY TOMPON'NY TENY FARANY,RAY MAHERY SY MAHAGAGA LOATRA;Ray b fitiavana sy b famindram-po.
Jerreo ka vonjeo izy Tompo Tsitoha ô.
(nosoratan'i vntViolette tamin'i 1 aogositra 2013)
Rainay izay any andanitra ô.Andriamanitra Tsitoha Hianao.
Manaiky Anao izao rehetra izao.
Mitenena fotsiny iany Tompo ho @ fanafahana anay dia ho afaka tokoa izahay zay mino Anao.
Tompo a! mivavaka sy mitalao Aminao aho mba ho afaka @fangejan'ny satana i violette,@ fisotroana mihopapa ny taoka andro aman'alina,ny fifohana sigara tsy anki-janona ary ny loza koa dia ny fitenenan-dratsy,ny fanopana sy ny fanozonana mivoaka ny vavany.
Mangataka famangiana avy Aminao, ary mitaho fanafahana avy Aminao koa Ray ô.
@ ANARAN'i JESO KRISTY;AMEN!
Fanitsiana vakio "hanokatra toeram-piasana" fa tsy toeram-pasana.DISO TSIPELINA fa tena manova le zavatra angatahina.
Ny Tompo mahalala ny tena ao am-po kanefa ny vava sy ny lela koa na mamono na mamelona.
misaotra Tompo noho ny famindramponao aminay.
(nosoratan'i christiane tamin'i 1 aogositra 2013)
Andriamanitra Raiko o! Raiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra Anao aho ny @ fitantananao ny faiainako, fa mampandresy ahy @ adiko rehetra Ianao.
Tsapako Ray o! fa marina eo @ fiaianako tokoa ny Teninao hoe "indro Izaho momba anareo mandrakariva..."Misaotra Jesosy a!.
Fantatrao anefa ny ady tsy maintsy mbola hatrehana, koa mbola mametraka izany eo ampototry ny Hazofijalianao aho, ary miandrandra hatrany ny famindramponao mba hitoetra amiko mandrakariva.
Deraina mandrakizay ny anaranao Tompo o!@ anaran'i Jesosy Kritsy Ilay Tompo sy Mpamonjy ahy no anaovako izany vavaka izany !
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 26 Jolay 2013)
Ny finoakoNy finoako :
Misaotra indrindra TOMPO amin ny fitiavana izay toloranao anay isan andro.
Mangataka ny famindramponao Aho Jesosy ny hamelanao heloka ahy tamin ny fahotana rehetra vitako teo imasonao.
Misaotra indrindra TOMPO.
Ankehitriny, mitalaho Aminao aho ny hodiovinao ny ato anatinay.
Jesosy o, Ianao irery no Toky sy Mpamonjy anay koa dia mino izahay Jesosy fa hainao ny zavatra rehetra.
Raiso Tompo ny haja ambony indrindra atolotro Anao.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 16 Jolay 2013)
Jesosy oh Misaotra nao ny mpanomponao fa mbola nomenao tombon'andro hahavelomana.
Tsy misy afaka mampitombo ny andro iainanay fa fahasoavana avy aminao raha mbola velon'aina.
Aoka anie ny ndro rehetra iainako dia holaniana hanehoana ny voninahitrao ary hijoroana vavalombelonao.
Ampianaro hahay hihainao mandrakariva fa tsy ho variana amin'izao fiainana izao.
Omeo fahasalamana feno anie ny mpanomponao satria moa misy zavamahagaga izay tsy hainay hatao.
Anao dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay.
(nosoratan'i Danielle tamin'i 8 Jolay 2013)
NY FIVAVAKONY FIVAVAKO:
Ny fiderako, ny fankalazako ,ny fihobiako,ny fisaorako,ny fankasitrahako ny TOMPO no taratry ny fivavako androany.
Mba omeo hery ,Tompo malala ô,ahazakako izay anjara tendrinao,ifonako ny tsy fahatanterahako.
Mahatoky ny indrafonao aho, Apetrako manokana eo am-pela-tananao ny fiainan'ny ankohonako, indrindra ny sombin'ny aiko izay fanomezana avy taminao.
Mpamindra fo sy mpamela heloka ianao;tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Misaotra Jesosy ô fa mbola afaka miantso ny anaranao aho.
(nosoratan'i SEHENO tamin'i 15 Jolay 2013)
Ry Andriamanitra Rainay ô!miantoraka Aminao ndray za @alalan'ity rindrim-bavavaka ity,satria mino aho fa miara-miombombavavaka amiko reo namako miditra eto ka iray fo saina fanahy @ finoana Anao,ny fahefanao,ny famindram-ponao,
HIANAO mamaly vavaka,satria hoy Hianao OE "ra misy 2na3 miantso ny Anaranao hivavaka dia eo afovoany Hianao".
Misaotra Tompo fa @ Anaran'i Jeso Kristy no anaovako zao vavaka izao.
Mangataka aho mba ho lasan'i AsyM le trano akaiky ny fiasanan'izy2.
Mangataka koa aho mba hiaino ny antoantson'i papa fa marary izy ka tsy misy hafa tsy Hianao no afaka manasitrana azy sy mamela ny helony ary koa ampitodika azy Aminao.
Valio Tompo ô!zao vavaka asandratray zao.
(nosoratan'i Maman tamin'i 28 Jona 2013)
JESOSY O, mifona Aminao aho satria mpanota eo imasonao.
Tsy mendrika ahy na dia ny hiantso ny anarao aza kanefa hainao ny zavatra rehetra ka dia matoky Anao izahay.
Mametraka ny olanay eo ambany hazo fijalianao izay ny mombanay rehetra.
Aza avela ho kivy ny olonao Tompo o, aza avela ho kivy.
Ankehitriny dia mametraka ny fiainanay izahay mba Ianao no hitantana ny fiainanay amin ny andronay rehetra.
Amin ny anaranao Jeso no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Harisoa tamin'i 8 Jolay 2013)
Misaotra Tompo fa mbola afaka miditra eto ndray itondra ambavaka ny fikasana hianatr'asa,ka hahay le asa sy hiroborobo anie zany asa kasaina hosokafana izany.
Misaotra @ anaran'i JESO KRISTY fa no IZY no nameno ny FANAHY MASINA tato anatiko,ka nitaridalana ahy iantoraka Aminao,hatoky Anao,hiantso Anao,hino ny asanao mahagaga eo @ fiainako.
Tompo a! ny fikasana sy ny faniriana dia efa ato anatiko fa Hianao irery no tena manatanteraka izany rehetra izany.
Koa @ fo feno fanantenana no ametrahako eo ampelatananao ny fikasanay mivady hianatra sy hanokatra toeram-pasana hanao SRGRPH;manantena ary mino fa homba anay Hianao ry Andriamanitra Ray Tsitoha @zany rehetra izany.
Ataoko @ Anaran'I JESO KRISTY Mpamonjy anay izany vavaka izany.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 27 Jona 2013)
Misaotra anao Jesosy noho ny nahafahako fanadinana , tena isaorako indrindra ny fitantananao ny mpanomponao, na dia tsy mendrika aza dia mbola namindranao fo Dera laza ambony indrindra anie ho anao ary inty ny mpanomponao aoka ho fitaovana hijoro vavolombelonao isan andro hatrany.
Tafio hery sy fahatokiana mandrakariva ny amin izay hitranga rahampitso sy ny ho avy rehetra ary zoka anie tsy hikatsaka afa tsy izay manome voninahitry ny anaranao masina aminny anaranao Jesosy
(nosoratan'i Danielle tamin'i 24 Jona 2013)
Misaotra Anao aho ry Tompo noho ny fitahianao ahy dia ny nanomezanao ahy ny fotoana nomen'ny mpitady mpiasa ny 19 sy 20 Juin 2013 ity satria anisan'ny présélectioan'ny dossier ko....fantatrao antsipirihany ny fiainako sy ny tonom-bavako andro aman'alina ka dia valio re mba hahazo valim-bavaka dia ny filaza n'ny mpampiasa androany fa mbola mila fotoana,
@ 15 Juillet any aho hahazo valin-teny na hovoaray na tsy ho voaray....noho izany indrindra Tompo malala ô! mino aho fa mpamaly vavaka Ianao, vonjeo aho sy ny ankohonako satria mino Anao aho
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 20 Jona 2013)